Waa maxay buurta adduunka ugu dheer? Wax walba waan kuu sheegeynaa | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 12/02/2021 16:00 | Geology
Markii aan ka hadlayno ka buurta adduunka ugu dheer waxaan badanaa ka fikirnaa buurta Everest. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo cabbiro dhererka buur iyo koox sahamiyayaal ah ayaa go'aansaday in la cabbiro dhererka dhammaan isu-imaatinnada safka buuraha himalayan. Waxay xiiseeyeen buur ka wada sareysa kuwa kale oo dhan. Waxay ahayd XV-ga ugu sarreeya.
Maqaalkani wuxuu kuu sheegayaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato buurta adduunka ugu dheer waxaanan ogaan doonnaa haddii Everest uu yahay buurta adduunka ugu dheer.
1 Buurta ugu dheer adduunka
2 Siyaabaha loo cabiro buur
3 Sameynta buurta ugu dheer adduunka
4 Buuro duug ah
Markii Hindiya ay gumeysaneysay Ingiriiska, koox sahamiyayaal ah ayaa bilaabay inay cabbiraan dhererka dhammaan meelaha ugu sarreeya ee Himalayas. Waxay ku xisaabiyeen joogga 9.000 mitir oo ka sarreeya heerka badda Summit XV. Tani waxay ka dhigtay buurta adduunka ugu dheer. Sanadkii 1865-kii waxay u beddeleen magaca inaadeerkaa Everest. Magacani wuxuu ka yimid George Everest, khabiir reer Wales ah oo mas'uulka ka ahaa cabbiraadda ku dhowaad dhammaan muuqaalka dhulka Hindiya. Tan iyo sanadkaas, tiro badan oo fuulayay ayaa isku dayay inay qabsadaan kulankooda si ay adduunka u tusaan inay cagta saareen buurta ugu dheer adduunka.
Waxaan ognahay sheekooyin nooc walba leh oo aan dhammaad wanaagsan lahayn. Waana inaan ku gaadhno meelahan dhaadheer cagaheenna oo khatar badani ku jirto. Laga soo bilaabo meel cayiman, xaaladaha deegaanku ma ahan kuwo ku habboon bini'aadamka inay muddo dheer sii joogaan. Cadaadisku wuxuu hoos u dhacaa dhererka sida heerkulka oo kale. Dhirta oo yaraata, cadaadiska oo yaraada iyo ogsijiin yar, joogitaanka meelaha dhaadheer ayaa dhib badan. Tan waxaan ku darnaa dhibka heerka hoose ee buurtu leedahay markii aan kor u qaadno joogga.
Sababahan oo dhami waa isku dhafka ugu fiican ee tirada shilalka badan ee jiray taariikhda oo dhan kuwa isku dayay inay fuulaan buurta adduunka ugu dheer.
Siyaabaha loo cabiro buur
Haddaan ka cabirno Everest heerka badda, waxaan aragnaa inuu yahay buurta adduunka ugu dheer. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira buuro kale oo ka sarreeya kan tan iyo inta aan adeegsanno cabbir kale si aan u xisaabino dhererkiisa. Waan ognahay in qaab kasta oo cabbiraaddu ku xiran tahay aragtida goobjoogaha. Muuqaal kale oo lagu tixgelinayo hab kasta oo cabbir ah ayaa ah barta tixraaca ee aan dooranayno.
Haddii aan adeegsanno tixraaca ka imanaya salka ay ku fadhiyaan buurahani, waxaan aragnaa in Kilimanjaro Tansaaniya iyo volcano Mauna Kea iyo Hawaii ayaa ka sarreeya Everest. Sidaad u aragto, waxay kuxirantahay barta tixraaca ee aan u adeegsanayno inaan ku cabirno dhererka waxaan arki karnaa in buurta ugu dheer aduunka aysan aheyn. Waxay noqon laheyd mid caqli gal ah in loo dhawaado barta tixraaca ee salka uu buur ku fadhiyo halkii laga qaadan lahaa joogga ka saraysa heerka badda sida barta tixraaca.
Buurta Kilimanjaro waxay ku fadhidaa bannaanka Afrika ee ku dhow heerka badda. Haddii aan ka cabiray buurtan salka hoose waxaan arkeynaa inay ka sarreyso Everest. Dhanka kale, haddii aan falanqeyno Mauna Kea waxaan aragnaa inay intaas ka sii sarreyso. Waana inay saldhig ku leedahay badda gunteeda. Ahaanshaha fulkaano, waxaan aragnaa in salka uu aad uga hooseeyay heerka badda. Ilaa iyo inta aan falanqeyneyno joogga salka uu buurtu fadhiyo, kan ugu sarreeya wuxuu noqon lahaa Mauna Kea.
Sameynta buurta ugu dheer adduunka
Haddii aan u qaadanno heerka badda tixraac ahaan, Everest waa buurta adduunka ugu dheer. Waana taas, sirta joogga Everest kuma jiro kulankeeda sare haddii aan dhulka hoostiisa ahayn. Qaabkii ay buurtani u samaysantay waxay ahayd qaabkii ay ugu suurtagashay inuu ku deggo meel sidan u dheer. 50 milyan oo sano kahor saxanka qaaradda ee Hindiya wuxuu isku dhacay qaaradda Aasiya. Tan iyo dhammaan taariikhda dhulka, waxay ahayd shilkii ugu weynaa ee dhaca 400 milyan ee sano ee la soo dhaafay. Shilka noocan oo kale ah wuxuu ahaa mid aad u rabshad badan oo saxanka Hindiya uusan burburin oo kaliya, laakiin sidoo kale wuxuu hoos u dhacay qaaradda Aasiya. Sidan oo kale, saxankan, oo ah marin looga gudbo qaaradda, ayaa cirka isku shareeray cirka, wuxuuna sameeyay Everest.
In kasta oo taarikada tectonic ay isku dhacaan adduunka oo dhan, wixii ka dhacay hoosta Everest waxay ahayd mid gaar ah. Sababtaas awgeed, buurtani waa buurta keliya ee ugu dheer adduunka marka laga waayo heerka badda.
Buuro duug ah
Xuddunta buuraha Himalaya waa mid aad u da'yar oo kaliya 50 milyan oo sano jir. Maaddaama taarikada ay riixayaan saxanka Hindiya waqooyiga iyo Aasiya hoosteeda, buuraha Himalayan ayaa sii kordhaya. Waqtigaan la joogo, xoogagga kor u kacaya waxay ka badan yihiin saameynta nabaad-guurka. Sidaan ognahay, nabaad-guurka ay sababaan biyaha iyo dabayshu, iyo wakiilada kale ee cilmiga dhulka wuxuu bilaabaa inuu yareeyo joogga sarsare ee lagu soo bandhigo iyaga. Mid ka mid ah dariiqooyinka lagu cabiro da'da buur waa in la arko heerka dhalanteedka iyo xumaanta ka soo gaadhay shirarkiisa.
Inta badan fuula fuulitaanka dusha sare ee Everest waxay sidaa u sameeyaan si sharaf leh oo ay u muujiyaan inay awoodaan inay fuulaan buurta adduunka ugu dheer. Si kastaba ha noqotee, buurtani way sii socotaa maanta. Qaybaha hoose ee buurta waxay ka samaysan yihiin dhagax adag, oo ka mid ah dhagaxyada ugu adag adduunka. Thanks to curintaan, waxay u oggolaanayaan inay u adkeysato nabaad-guurka oo aad uga fiican buuraha kale ee adag.
Kadib dhulgariirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Nepal, dhammaan buuraha waqooyiga ka xiga Kathmandu waxay sara kaceen ilaa hal mitir. Sidaa darteed, Everest waxaa laga yaabaa inay xoogaa hoos u degtay. Qeybtani gebi ahaanba waa la iska indhatirayaa marka loo eego wadarta guud. Xaddiga nabaad guurka ayaa mar uun ama koritaanka ay sababtay riixitaanka taarikada. In kasta oo ay weli jiraan malaayiin sano in sidaas la yeelo, Everest ayaa waayi doonta magaca buurta ugu dheer adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Buurta ugu dheer adduunka